ဘုန်းကျော်: Thank you U Thein Sein
Thank you U Thein Sein
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်နှင့် တကွသော လက်ရှိကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးရေးအစိုးမှ မြစ်စုံဆည်စီမံကိန်းအား ရပ်ဆိုင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြားသိရပါသည်။ ထို့ ကြောင့် ဖော်မပြနိုင်သော ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါသည်။ ပြည်သူ့ လူထုရဲ့ အသံကိုနားထောင်သည့် အစိုးရဖြစ်ကြောင်း လက်တွေ့ ပြသလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့် လေးစားမိပါသည်။ ကျနော်တို့ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးမှလည်း ယခုကိစ္စနှင့်ပက်သက်၍ အစိုးရအားဝိုင်းပြီးချီးကျူးကြပေးစေချင်ပါသည်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Friday, September 30, 2011
သွေးရှိရင် ကိုယ့်နိုင်ငံထဲမှာ လက်သီးတောင် ခွက်ပုန်းဆုပ်ရဲလို့လား?
ငါ့မှာ အဖေရှိလို့ အမေရှိလို့ သားရှိလို့ မယားရှိလို့ xxx ဖြစ်လို့ ဒါဘဲမဟုတ်လား ဆင်ခြေဆင်ေxွးမျိုးစုံ...
မင်းဦးနှောက်မရှိတာ လူတွေကို လုက်မကြော်ငြာနဲ့..
လည်ပင်းထိ တက်နင်းထားတဲ့လူက နေကောင်းလားမေးတာ မင်းခံဘူးလား.. ပြောတာနားရောလည်လား...မကျေနပ်ရန် ဒီ Comment ကို မင်း blog မှာ တင်ရဲလား ??
That is so called ..Real opposition.. We must support & appreciate things done by our enemy if it is good to our people & country.
Not like some demo attackers who only know how to criticize the gov.
Bravo Man...Let's pray the good things for our country.
ဟီး ဟီး ငါ့ကောင်ကြီး ဂုံးကျော်တော့ အပီဖဲ့ခံနေရတယ်ဝေ့ - ရေးစရာရှိတာဆက်ရေး - ပွားစရာရှိတာဆက်ပွား - လိုအပ်ရင် အလုပ်က မယ်ဒီကယ်လ် လိဖ် ယူပြီး အပီသာပွား ဟေ့ကောင်ရေ.. စကားမစပ် မင့် သူများတွေကိုတော့ ဘောမခိုင်း လဥမ ခိုင်းပြီး မင်းကျတော့ ဘာ "မ" မှာတုန်းကွ တခုခုတော့ မ ရမယ်နော့